शत्रुले पनि केही गर्न सक्दैनन् हातमा यस्तो रेखा हुने मानिसलाई
आइतवार, अगस्ट 25, 2019
यी हुन् आफ्नो श्रीमानलाई सधै दबाएर राख्ने ४ राशिका महिलाहरु
मेगा ल्याब प्रालिको बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा २०७६ सम्पन्न
शनिबार यी कामहरु भुलेर नगर्नुहोस्
डिसेम्बर 18, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment रेखा, शत्रु, हात
हस्तशास्त्रमा हातको रेखाको विशेष महत्व हुन्छ। व्यक्तिको भाग्य यिनै रेखासँग जोडिएको हुन्छ। तपाइँको बैंक ब्यालेन्सदेखि लिएर सफलताको राज हातको यिनै रेखामा लुकेको हुन्छ। आज हामी तपाइँलाई हातमा बनेको यस्तो रेखाका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जसको हातमा यो रेखा छ, उसको भाग्य चम्किन्छ।
त्यसो त व्यक्तिको हातमा कयौं प्रकारका रेखा हुन्छन्। तर हातमा बनेको ‘भी’ आकारको चिन्ह निकै राम्रो मानिन्छ। हस्तशास्त्र विद्वानका अनुसार यस्तो रेखा हुने व्यक्तिमाथि भगवान विष्णुको विशेष कृपा हुन्छ।
यो रेखा हृदय रेखाको माथि चोर औंला माझी औंलाको बीचमा हुन्छ। यो रखाको एउटा सिरा चोरी औंलामा गुरु पर्वतको अगाडि तथा दोस्रो रिसा गुरु पर्वतको तल हुन्छ। दुवै रेखा मिलेर ‘भी’ आकार बनेको हुन्छ। जसलाई भगवान विष्णुको चिन्ह पनि भनिन्छ।
यस्तो चिन्ह भएका व्यक्ति जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्छन्। यस्तो रेखा भएका व्यक्तिले जीवनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन। उनीहरुलाई थोरै परिश्रमले पनि धेरै फल प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्ति जुन क्षेत्रमा हात हाल्छन् त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्छन्। (एजेन्सीको सहयोगमा)
हत्केलाको यो भागले बताउने छ कि तपाई कति भाग्यशाली भनेर ?
यस्तो छ हातमा हुने राजयोगलाई पनि नाश गर्न सक्ने अशुभ ‘निशान’
जन्मदा शरीरमा भएका चिन्हहरुको शुभ र अशुभ फल
← मेरो नेपाल गरीव होइन यसलाई हरीप बनाइएको हो ?
लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने तरिकाहरु →
ज्योतिषशास्त्र अनुसार कुन राशिको शुभ रंग कुन
जुन 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
शनि र राहुको सम्वन्ध
मार्च 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
अप्रील 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक 10
One thought on “शत्रुले पनि केही गर्न सक्दैनन् हातमा यस्तो रेखा हुने मानिसलाई”
Pingback:यी ९ प्रकारका मानिससँग कहिल्यै नगर्नुहोस् दुश्मनी ! अन्यथा प्राण पर्छ संकटमा
वातावरण संरक्षण हामी सबैको दायित्व